BUDHCAD BADEED AFDUUBATAY MARKAB LAGA LEEYAHAY DALKA BILJAMAKA | Toggaherer's Weblog
Bosaaso 18 April 2009(THN)
Burcad Badeeda Soomaaliyeed ayaa maanta qaadey laba weerar oo xoogan mid kamid ah weerarkaas waxa ay gacanta ku dhigeen Markab laga leeyahay dalka Biljim kaas oo lagu magacaabo Pompie. Markabka ayaa waxaa saarnaa 10 qof oo shaqaale ah kuwaas oo kala ahaa labo u dhashey dalka Biljim, afar u dhashey wadanka Koroweeshiya (Croatia), iyo sadex u dhalatay wadanka Filipin.
War ka soo baxay dawladda Biljimka ayaa lagu sheegay in markabku uu soo direy laba fariimood (Signal) taas oo uu ku dalbanaayo caawinaad, waxa ay sheegeen meel u jirta 600 mayl biyaha Soomaaliya in laga qabsadey waxa uuna ku sii jeeday Jasiirada Siishilis.
Ninka haysta Ciidanka Nato ee ilaaliya biyaha gacanka cadmeed ayaa sheegay in Ciidanka Nato ay jawaab ka bixiyeen mid kamid ah fariimaha ay soo direen Maraakiibta la wareeray maanta, ayagoo u gargaaray markab lagu magacaabo Marshal Islands, markabkaas oo laga leeyahay dalka Giriiga ayaa ah nooca tanker-ka, waxaana uu ahaa mid weerar xoogan lagu hayey.
Ciidanka dalka Holland ayaa ka jawaabey weerarkaas waxa ayna gacanta ku dhigeen burcadda inkasta oo ay markii danbe sii daayeen waxayna bad baadiyeen 20 kaluumaysato u dhashey dalka Yaman kuwaan oo doontooda ay u isticmaalayeen Burcaddu sidii ay ugu qabsan lahaayeen maraakiib kale (Mother Ship), Kaluumaysatadan ayaa u afduubnaa burcadda muddo asbuuc ah waana xeelad kamid ah tabta ay burcaddu wax u qafaalato.
Qafaalashada markabka cusub ee dalka Biljimka ayaa muujinaysa awooda baaxadda leh iyo dhiiranaanta Burcad badeeda, iyada oo asbuucii hore ciidmada Maraykanka iyo Faransiisku ay dileen 5 kamid ah burcadda ayna gacanta ku dhigeen 4 nolol lagu qabtay.
Burcad Badeed la yiraahdo Cali Caarif oo kusugan EYL ayaa horaantii Bishii Janaayo wacad ku maray in bisha sadexaad haddii la gaaro caalamku ka qaylin doono Burcadda, waxa ayna aad u laba laabeen weeraradii ay ku hayeen maraakiibta caalamka labadii bilood ee u danbeysey.
Xiligan ayaa ah bada mid degen isla markaana u fududeenaya burcad badeeda inay adeegsadaan doonyahooda yar yar ee wax ku qafaashaan, kuwaasi oo uusan soo qaban karin Raadaarka ay wax ku baadi goobaan maraakiibta waaweyn ee dagaalka ee Caalamka oo gaaf wareegaya bada Soomaaliyeed.
Waxaa maalmaha soo socda shir uga furmayaa beesha caalamka Dalka Kenya, waxaana soo abaabulay dalka Maraykanka, shirkaas ayaa looga arinsanayaa sidii loo dabarjari lahaa Burcad badeeda, isla markaasna wax looga qaban lahaa Fakhriga, iyo Fawdada ka taagan Soomaaliya & iyo wixii keenay Burcadda oo ah Kaluunka Soomaaliya ee tuuganimada lagu qaato iyo Sunta lagu aaso badaha Soomaaliya, waxaa ku sugan Kenya wefdi ka socda maamulka Puntland si ay uga qaybgalaan shirkaas.